भ्रष्टाचार र विश्वासघात गर्दिन : उम्मेदवार केसी - Pokhara News
पोखरा न्यूज -०६, मंसिर । साझा पार्टीका तर्फबाट कास्की-२ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकी रजनी केसीले जनविश्वास माथि कुठाराघात नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
शुक्रबार पोखरा-९ बसपार्कमा आयोजित चुनावी कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको विश्वासमाथि वर्षौंदेखि घात हुँदै आएको र अब त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । उनले चुनाव ताका गरिने प्रतिबद्धता नेताले बिर्सिने परिपाटी रहेको भन्दै आफूले त्यसलाई चिरेर नयाँ सन्देश प्रवाह गर्ने स्पष्ट पारिन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा रहेको राजनीतिक भागबण्डाले देश विकास प्रभावित भएको जिकिर गरिन् ।
“चुनावमा भोट माग्दा यो गर्दिन्छु, त्यो गर्दिन्छु भन्ने परिपाटी नेपाली राजनीतिमा छ” उनले भनिन्, “अब त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, म त्यही परिपाटीलाई चिरेर नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न चाहान्छु ।” देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र त्यसले गर्दा नै देशको विकास क्रम सुस्त भएको उनले बताइन् । “उत्कृष्ट र क्षमतावानको कदर हुँदैन, जसको राजनीतिक पहुँच छ उसले जसरी पनि पाउनुपर्छ भन्ने भएरै देश डुब्यो” उनले थपिन्, “विकास र समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ, सजग हुनुपर्ने बेला आयो ।”
साझ पार्टीले उपनिर्वाचनलाई जनमत सङ्ग्रहको रुपमा लिएको बताउँदै कम्युनिष्ट र काङ्ग्रेसलाई सबक सिकाउने राम्रो अवसर उपनिर्वाचनले दिएको उनले बताइन् । पालैपालो देश चलाएका राजनीतिक दलसँग जनता रुष्ट रहेको र त्यसको विकल्प साझा पार्टी नै भएको उनको दाबी थियो । उम्मेदवार केसीले घरदैलोमा पुग्दा मतदाताले आफूलाई उत्साह थपिदिएको बताइन् ।
दुई तिहाइ हुँदा पनि विकासको लक्षण देखिएन
सभालाई सम्बोधन गर्दै साझा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य सुशीला केसी अधिकारीले देशको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भनिए पनि जनताको जीवनमा खासै प्रभाव नपरेको बताइन् । उनले भनिन्, “नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनिन्छ तर, जनताको जीवनस्तर अझै उकासिन सकेको छैन् ।”
राजतन्त्र र गणतन्त्रको फरक जनताले अनुभव गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो । “राजतन्त्र फाल्यौं, गणतन्त्र आयो र अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । दुई तिहाइ हुँदा पनि विकासको लक्षण देखिएको छैन, हामी कहिलेसम्म बन्दी बनेर बस्ने ? अब सोच्नै पर्ने बेला आइसकेको छ ।” उनले भनिन् ।
पार्टीले चुनावको मिति नजिकिएसँगै घरदैलो कार्यक्रम र कोणसभा कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको छ । उम्मेदवार केसीसहितको टोली शुक्रबार पोखरा-७ एयरपोर्ट, पोखर-९ नयाँबजार, पोखरा-८ शिवालय चोकलगायतका क्षेत्रमा घरदैलो र कोणसभामा सक्रिय बनेको थियो ।
पोखरामा नेकपाको विजयसभा
कास्की-२ मा बिद्या भट्टराईको जितसंगै विजयी उत्सव
कास्की-२ मा बिद्या भट्टराई विजयी, काँग्रेस उम्मेदवार पौडेलले दिए बधाई
कास्की-२ मा नेकपाकी उम्मेदवार बिद्या भट्टराईको जित पक्का
आजको सुन चाँदी दरभाउ
पिकनिक जानेक्रममा बस दुर्घटना हुँदा १३ घाइते
बागलुङमा जीप दुर्घटना हुँदा १४ को मृत्यु, उद्धार कार्य जारी
बिच भलिबलमा दुवै नेपाली पुरुष टोली विजयी
बुहारीलाई बलात्कार गरी सासूको हत्या गरेको अभियोगका फरार पक्राउ
शिरसुबाको छायांकन सम्पन्न
१३ औं साग :
१३ औं साग : पोखरामा ४० करोडको कारोबार, डेढ अर्बको भौतिक संरचना
साग महिला फुटबलको स्वर्ण भारतलाई, नेपाल रजतमा सीमित
पोखरामा महिला फुटबलको फाइनलमा ४ हजार दर्शक मात्र प्रवेश गराउने तयारी
१३ औं सागका रेफ्री चौधरीका दुई छोरीले जिते पदक
सूर्यमणि स्मृति पुरस्कारबाट डा. जगमान गुरुङ सम्मानित